Manomana alohan'ny fitsarana | Orinasa Mpampanoa lalàna
Fiomanana alohan'ny fitsarana
Leave a Comment / mpisolovava, Blog, raharaham-pitsarana, Vaovao / By Sarah
Mila fiomanana sy fikarohana lalina ny fandehanana eny amin'ny fitsarana mba hiarovana tsara ny raharahanao. Rehefa tojo olana ara-pitsarana dia mety ho safidy farany ny fitsaram-bahoaka raha tsy voalamina am-pilaminana. Ny fizotran'ny fitsarana, etsy ankilany, angamba tena mahasosotra. Ny fanatrehan'ny mpitory, ny voampanga ary ny mpisolovava/mpisolovava dia takiana mandritra ny fotoam-pitsarana.
Na dia somary vitsy aza ny fitoriana mitaky fitsarana feno, raha tsy maintsy mandeha eny amin'ny fitsarana ny raharahanao, dia mila mpisolovava momba ny fitsarana sivily ianao izay mahafantatra ny fomba hananganana raharaha mandresy. Na dia manana teknika miavaka aza ny mpisolovava isan-karazany, ny mpisolovava tsara indrindra amin'ny efitrano fitsarana dia manana toetra manan-danja.
Ny mpisolovava mahomby indrindra dia manana ny fahaiza-manao manaraka:
Ny maha-olona sy ny fisian'ny fitsarana
Ilaina ny fandrindrana mafy sy fisainana mitsikera.
Ny sasany amin'ireo fahaiza-manao ireo dia ampianarina any amin'ny sekolin'ny lalàna, raha ny hafa kosa dia toetra tsy maintsy amboarina rehefa mandeha ny fotoana amin'ny alàlan'ny traikefa fitsapana. Andeha hodinihintsika lalindalina kokoa ny faritra tsirairay hahitana hoe inona no toetra tokony hotadiavinao amin'ny mpisolovava fitsarana.
Ireto misy torohevitra tokony horaisinao alohan'ny hisehoana eo anatrehan'ny fitsarana:
Makà mpisolovava tsara. Sarotra loatra ny olana ara-pitsarana. Eo foana ny mpisolovava mba hitarika sy hanampy amin'izao toe-draharaha misy hetra izao. Tsara ny manatona mpisolovava mahay ary mangataka torohevitra momba ny fomba hamahana ny olanao. Ny raharaha sasany dia mety halamina ivelan'ny fitsarana fa raha misy olana ara-pitsarana henjana, dia mety ilaina ny fitsarana. Mitadiava mpisolovava mahay izay afaka misolo tena sy miaro anao amin'ny fitsarana.
Mivonona. Amin'ny andro hanaovana ny hetsika dia ataovy azo antoka fa efa vonona ianao. Mety hisy mpisolovava ho eo, saingy tsy maintsy vonona koa ianao. Manaova fandalinana betsaka momba ny raharahanao, indrindra amin'ny fomba ilalaovan'ny andaniny ny raharaha. Angony ny fampahalalana rehetra sy ny antsipiriany momba ny raharahanao. Amboary ny antontan-taratasy rehetra ho porofo na porofo raha ilaina. Mety hanampy ihany koa ny fanombohana voalohany amin'ny fanatrehana fitsarana hafa. Izany dia hitarika anao amin'ny fandehan'ny fitsarana. Raha mila vavolombelona ianao, dia ataovy azo antoka fa hiseho amin'ny fitsarana izy ireo.
Arrival. Mankanesa any amin'ny fitsarana farafahakeliny 30 minitra alohan'ny fotoananao. Izany dia hanome anao fotoana ampy hialana voly, hifantoka ary handamina ny tenanao. Fadio ny mifanandrina amin’ny ankilany. Aza mitondra ny zanakao eny amin'ny fitsarana raha tsy misy fepetra fa tena tsy mety izany. Afaka mitondra olona ao amin'ny fianakavianao na namana ianao mba hanohana. Tsy maintsy 18 taona no ho miakatra izy ireo.
Akanjo tsara. Tsy foana ny mijoro eo amin'ny fitsarana hiteny, fa tokony hiakanjo mifanaraka amin'izany ianao. Ny fitsarana iray dia toerana ofisialy. Na dia tsy mitaky akanjo fisoloana akanjo aza, dia mahaiza mandanjalanja amin'ny fisafidianana izay hotafinao.
Raiso an-tsoratra mandritra ny fakana am-bavany. Mety hisolo tena anao eny amin'ny fitsarana ny mpisolovava iray. Izy no hanao ny fiarovan-tena rehetra na hiteny amin'ny anaranao. Na izany aza, tsara kokoa ny manao an-tsoratra momba ny zavatra asehon'ny ampahany hafa.
Aza atao ao anatin'ny efitrano fitsarana. Aza miteniteny foana mandritra ny fitsarana. Tsy mahazo milaza ny fijoroanao ianao. Afaka manao izany ho anao ny mpisolovava anao. Miresaha amin'ny mpisolovava anao raha heverinao fa manana zavatra holazaina ianao. Miresaha amin'ny mpitsara ihany raha asaina manao izany ianao. Raha anontaniana dia valio mivantana amin'ny feo mazava sy amin'ny votoaty voaforona.
Toetran'ny fitsarana na fihainoana izay misongadina ao amin'ny Fitsarana UAE
Ny fitsarana ambony na ny fitsarana ambony dia hampiaiky ny mpitsara na mpitsara amin'ny fanaovana ireto manaraka ireto:
Manana fomba fijery miabo
Aoka ianao ho fahalalam-pomba amin'ny olona rehetra ao amin'ny efitrano fitsarana, anisan'izany ny mpanolo-tsaina mpanohitra.
Matihanina sy miomana
Tsy mandany fotoana ny olona.
Ny maha-mpihaino tsara sy mamakafaka ny fihetsiky ny mpitsara sy ny mpitsara amin'ny fomba kanto, ary ny fitantanana amim-pahamendrehana ny hetsika tsy ampoizina
Ny maha-zava-dehibe ny drafitra mafy sy ny fisainana mitsikera
Ny fitsarana tsirairay dia misy drafitra tokana mifototra amin'ny zava-misy, fa amin'ny ankapobeny, ny mpisolovava tsirairay dia tsy maintsy mamita ireto dingana manaraka ireto:
Ny fikarohana savaranonando mba handalinana ny lafiny rehetra amin'ny raharaha dia mamolavola paikady hitazomana ny zava-drehetra ao anatin'ny filaminana sy mora azo
Angony ny porofo rehetra, anisan'izany ny fametrahana ilaina
Alao ny antontan-taratasy ilaina rehetra
Mamorona famintinana betsaka momba ny fijoroana ho vavolombelona mivantana sy fanontaniana fandinihan-tena ho ampiasaina amin'ny fitsarana manomana fampiratiana sy fanampiana azo ampiasaina amin'ny fitsarana.
Mamorona fanehoan-kevitra fanokafana avy amin'ny fo sy tohan-kevitra famaranana mandresy lahatra
Diniho ny tanjon'ny fifantenana mpitsara.
Manangona toromarika mpitsara.
Raha vao tafapetraka ny fototra, dia hihemotra ny mpisolovavan'ny fitsarana marani-tsaina ary handinika tsara ny fitantarana tranga tsara indrindra atolotra mba hahitana ny mpandinika ny zava-misy ho an'ny mpanjifa. Tsy azo tsindriana ny maha-zava-dehibe an’io drafitrasa mialoha ny fitsarana io. Na dia manantena aza ianao fa hilamina ny raharahanao alohan'ny hidiranao any amin'ny fitsarana, dia tsy maintsy miomana amin'ny fitsarana ny mpisolovava anao. Raha ny marina, ny fiomanana amin'ny fitsarana mety dia mety hanampy amin'ny famahana ny raharahanao. Amin'ny lafiny iray, raha tsy vonona ho amin'ny fitsarana ny mpisolovava anao, dia ho ratsy toerana ianao hifampiraharaha amin'ny fifanarahana.